Mumwe OnePlus Band anokwikwidza kune Xiaomi Mi Band 5? | TeraNews.net
Mumwe OnePlus Band anokwikwidza kune Xiaomi Mi Band 5?
Munyori Nikitin Eugenius Yakabudiswa pa 04.01.2021
Pasina ruzivo mune chero nzvimbo, zvinokwanisika kuvhura zvigadzirwa pamusika zvinoenderana nezviitiko zviviri. Gadzira chimwe chinhu chitsva uye chakasarudzika. Kana, tora pfungwa yemukwikwidzi, ishandure uye ugoisa pasi peyako logo. Corporation BBK, ichizivisa kuburitswa kweOnePlus Band, yakafunga nezvechitatu sarudzo. Tora Xiaomi Mi Band 5 sehwaro uye uite kuti itonhorere. Kutarisa nechitarisiko, iye mugadziri akazeza kwenguva refu uye haana kuita kopi yeanozivikanwa Xiaomi wachi.
Insider Ishan Agarwal akanyora pa Twitter kuti chigadzirwa chitsva chinokwikwidza chakanangana neXiaomi Mi Band 5 maererano nekushanda nemutengo. AMOLED skrini 1.1 inches, IP68 kuchengetedza, moyo wekutarisa. Iko kune kunyange iko kutsunga kweropa okisijeni kuzadza. OnePlus Band mutengo i $ 35.
Iko hakuna chiratidzo chemakwikwi neXiaomi Mi Band 5 pano. Kana chete nekuda kwekushanda kweOnePlus Band kuri kunakidza zvakanyanya. Kuti uwane mufaro wakazara, chete iyo NFC module ndiyo isipo. Uye zvinonyadzisa kuti mugadziri haana kufanoona izvi. Mushure mezvose, nyika yese yagara kwenguva refu ichienda kune iyi isina waya tekinoroji. Rega OnePlus Band idhure madhora mashanu. Asi zvainakidza vatengi. Ngatitarisirei kuti zvakasiyana XiaomiOnePlus haizonamatwe neimwe dhizaini, asi ichaburitsa zvimwe zvinonakidza zvigadzirwa.
POCO debut: smartwatch uye smartphone
Segway Ninebot Injini Mutauri inogadzira injini ine ruzha
Mota yezvombo Oppo Tsvaga X5 Pro + - zvakatemwa
ASUS GeForce RTX 3080 10GB Noctua Edition yemifananidzo kadhi
UFS 4.0 - Samsung inotyora stereotypes
Apple, Google neMicrosoft Vanopikisa Kugadzirisa Kodzero dzeMutemo
Dune HD RealBox 4K TV Bhokisi: Yakakodzera Kutenga
MiTo MT3 Noctua Keycap Set - padanho rekubatana kutsva
Chii chinonzi Wi-Fi 6, nei ichidikanwa uye ndeipi tarisiro